गभर्नरका रुपमा डा. नेपालको पाँच वर्ष : कति सफल कति असफल ? – Nepal Japan
नेपाल जापान ५ चैत्र १२:२०
डा. चिरञ्जीवी नेपाल मंगलबारबाट राष्ट्रबैंकको गभर्नरका रुपमा पाँचवर्षे जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्कदै गर्दा भन्नुभयो जीवनमा नोटमा हस्ताक्षर गर्छु भनेर सचेकै थिइँन । त जीवनयात्रामा सोच्दै नसोचेको त्यो काम समयले सम्पन्न गरिदियो ।
पाल्पाबाट काठमाडौं छिरेको एक गाउँले केटोेले नेपालको गभर्नर बन्छु र नोटमा हस्ताक्षर गर्छु भन्ने सपना देखेको थिएन । तर समयले बनाइदियो । “जिन्दगीमा जहाँ जहाँ काम गरेँ, एउटा मानक नै स्थापित गरेँ भन्ने लाग्छ । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबल बनाउन लागेँ । आज मेरो विरोध गर्नेहरू भोलि त्यतिबेला राम्रो भएछ भन्ने अवस्थामा पक्का पुग्नेछन् ” रासससँग कुराकानीको क्रममा धेरैजसो भावुक हुदै डा.चिरञ्जीवी नेपालले भन्नुभयो । उहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा अवकास हुदै हुनुहुनथ्यो । त्यसैले पनि अघिपछिको तुलनामा आजको भावुकता बढी नै देखिएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो “गभर्नर बन्छु र नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाउँछु भन्ने त लागेकै थिएन ।” आज नेपालको बजारमा उहाँले नै हस्ताक्षर गरेका रु पाँच खर्ब बराबरको नोट चलनचल्तीमा छन् ।
पाँच वर्षको अवधिमा भए गरेका कामको बारेमा उहाँले लामो कुराकानी गर्नुभयो । “जीवनमा प्राप्त भएको सफलताका पछाडि ठूलो मेहनत र लगनले नै काम गर्‍यो । गभर्नरको रूपमा रहँदा अनेकन दबाव आए, अनेकन् लाञ्छना पनि लागे, नकारात्मक प्रवृत्तिसँग पनि जुध्नुप¥यो” डा नेपालले भन्नुभयो ।
“बिग्रिहाल्छ कि भनेर हेरेँ, दुई तीन पटक गरेँ । अन्त्यमा लौ यही हुन्छ भनेर नमूना हस्ताक्षर गरेँ । दुई तीन वटामा लेख्ने खालको हेरेर, दुई तीन ठाँउमा गरेर हेरेँ” उहाँले आफ्नो अनुभव स्मरण गर्दै भन्नुभयो “विश्वास एउटा के हुँदो रहेछ भने, यो कागज मेरो हस्ताक्षर भएपछि नागरिकको हातमा नोटको रूपमा जान्छ ।”
सुरक्षाकर्मीको सन्तान भएकाले १० कक्षासम्म पढदा पाँच सात वटा विद्यालय चाहारेको, नागरिकको दुःख देखेको हुनाले पनि ती नागरिकको विश्वास र उनीहरूले दुःख गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा पारेको निक्षपको सुरक्षामा आफ्नो कार्यकाल भरी नै सधैँ ध्यान दिएको बताउनुहुन्छ नेपाल ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्न भएको एक महिना पुग्दा नपुग्दै गोरखा भूकम्पले नेपालको मुटु नराम्ररी हल्लाइदिएको थियो । आफैले कार्यसम्पादन गर्ने बालुवाटारको भवन ध्वस्त भएको थियो । थापाथलीको भवनको हालत पनि उस्तै थियो । को धनी, को गरिब सबै सडकमा थिए । धेरैको आश खोसिएको थियो । कति घरबार बिहिन भएका थिए । केन्द्रीय बैंकको काम कारवाहीको राम्ररी जानकारी नै नपाइसक्दा नेपाललाई पनि अरुहरूलाई जस्तै भूकम्पले हल्लाइदिएको थियो ।
उहाँ गभर्नर भएर आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको योजना अलपत्र अवस्थामा थियो । उनीहरूले टेरिरहेका थिएनन । पूँजी वृद्धिको विषयमा अध्ययन गर्न लगाएको पनि रहेछ । त्यो दस्तावेज केन्द्रीय बैंकमा नै थियो । आइएमएफले पनि पूँजी वृद्धि गर्नुपर्छ, होइन भने तिमीहरूको बैंकमा समस्या आउँछ भनेर आधार कमजोर रहेको बताएको थियो । आफैले अध्ययन गर्दा पनि त्यो पाएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।
त्यतिबेला पूँजी रु आठ अर्ब भन्दा पनि वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने थियो । रु १० देखि रु १६ अर्ब सम्म पुर्‍याऔ भन्ने पनि थियो । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन रु २३ खर्बको थियो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्था समस्यामा थिए ।
निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगे ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको पूँजी बढेर रु आठ अर्ब पुग्यो । तर, संसदको अर्थ समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री, वहालवाला अर्थमन्त्री र सांसदहरूसँग पनि विवाद भएको स्मरण गर्नुहुन्छ ।
व्यापार व्यवसाय बढेका छन् । पठाओ, टुटल जस्ता निक्कै सिर्जनात्मक क्षेत्रमा पनि लगानी भएको छ । बैंकहरूले नयाँ नयाँ स्किम पनि दिएका छन् । उहाँकै कार्यकालमा रु पाँच अर्बको रिफाइनान्सलाई रु ५० अर्बको बनाइएको छ । त्यसमा पनि माग बढ्दै गएको छ ।
नेपाली बैंकहरूले नै रु १६ अर्बसम्म लगानी गर्न सक्ने भएका छन् । होङसी शिव्म सिमेन्टमा एउटै बैंकले नै ऋण दिएको छ । बैंकको क्षमता विस्तार भएको छ ।
ग्राण्ड बैंक, एनसिसि बैंक, गोर्खा बैंकमा केन्द्रीय बैंकका दुई तीन जना कर्मचारी गएर, सञ्चालन गरेका थिए । उहाँले भन्नुभयो “आफैले अनुमतिपत्र दिने, नियमन पनि गर्ने व्यवस्था भएपनि बैंकका नै कर्मचारी जाँदा नियमन गर्न नसकेको जस्तो देखियो ।” सोही कारण पूँजी वृद्धिको अवसर समेत दिइयो । एक आपसमा गाभिन समेत निर्देशन दिइयो । सोही कारण समस्याग्रस्त संस्थाहरू क्रमशः सप्रियर सबल बन्न थाले । नसक्नेहरू गाभिए ।
डा नेपाल राष्ट्र बैंकको क्याडर नभएका कारण पनि बैंक कसरी चलाउँछ भन्ने जिज्ञासा धेरैमा थियो । भन्नुहुन्छ “मलाई लाभ के भयो भने त्यसअघि मैले नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । सो संस्थामा बसेर दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसले मलाई वित्तीय क्षेत्रको राम्रो अनुभव दिएको थियो ।”
नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक ग्लोबल आइएमइ र जनता बैंक गाभियो । यो निर्णय गभर्नर नेपालको कार्यकालको शुरुवाती बिग मर्जर हो । अरु बैंकहरू पनि प्रक्रियामा छन् । डा नेपाल भन्नुहुन्छ “मेरो कार्यकालमा बिऊ रोपिएको छ । यो क्रमशः फस्टाउँदै जान्छ ।” गाभ्ने प्रक्रियालाई तिव्रता दिएर १५ वटामा झार्न सकियो भने वित्तीय क्षेत्रलाई सहयोग पुग्छ भन्ने सोचका साथ काम भएको बताउनुहुन्छ नेपाल । उहाँकै कार्यकालमा १८५ बैंक वित्तीय संस्थाको दर्ता खारेज भएर ४५ मा आए ।
केन्द्रीय बैंकले अझै बिग मर्जर गराउने नीति लिएको छ । “अर्को जो गभर्नर आउँछ, उसले त त्यो काम अगाडि बढाउनै पर्छ, नगरी सुखै छैन, समयले नै गराउँछ” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
गभर्नरहरूको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन इन्डोनेसिया जाँदा विदेशी गभर्नरहरूले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई शपथ गराउने कार्यक्रम आ– आफ्नो देशमा रहेको बताए । त्यो सुनेर डा नेपालले अचम्म मान्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनताको हो । कूल ९२ प्रतिशत जनताको लगानी हुन्छ । तर, बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राज्यप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने भन्ने त भएन । गभर्नरहरूको सम्मेलनबाट फर्किएपछि डा नेपालले डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गर्नुभयो ।
राजनीतिक रूपमा कसैको स्वार्थमा काम गर्ने गभर्नर भयो भने संस्थाको गरिमा नै धरमराउने उहाँको भनाइ छ । संसारभर नै सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच स्वायत्तताको विवाद हुने गरेको छ । भारतमा पनि तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले राजीनामा नै दिनुप¥यो ।
यसअघिका गभर्नर डा युवराज खतिवडा हाल अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । अब आउने गभर्नरको चुनौती के छ ? हाम्रो अर्को प्रश्न थियो । उहाँले भन्नुभयो “फिनटेकको बेलामा बैंकिङ सुरक्षाको विषय नै, प्रमुख हो । त्यसलाई नै ध्यान दिनुपर्छ ।” बैंकिङ सुरक्षामा संसारभर नै जोखिम देखा परेको छ । त्यो अमेरिका यूरोपमा पनि छ । केन्द्रीय बैंकले साइबर सेक्युरिटीमा लगानी बढाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।